Ungayijezisa kanjani inja kahle, uyazi ukuthi ungayenza kanjani? | Izinja Umhlaba
Ungayijezisa kanjani inja
Ingabe inja yakho ayiziphathi kahle futhi ucabanga ukuthi ngokuyijezisa uzokwazi ukuyixazulula? Ukujezisa kuyisisekelo esiyisisekelo semfundo okufanele sazi ukuthi singasisebenzisa kanjani ukuze isebenze futhi ingabi nokuzala.
Ukujezisa inja yakho kufanele ngaso sonke isikhathi kube isenzo semfundo ukuze aqonde ukuthi akwenzile akunakuphindwa. Gcina engqondweni ukuthi yini ongayisebenzisa Udlame lokumjezisa lungaba yinyathelo elibuyela emuva futhi konke okwenzayo kumenza abe nolaka futhi angathembi. Okulandelayo, ngichaza ukuthi yini okufanele uyenze lapho inja yakho ingaziphathi kahle, nini ukusebenzisa isijeziso nokuthi ungayenza kanjani:
1 Uzoyijezisa nini inja yakho?
2 Ungasisebenzisa kanjani isijeziso?
2.1 Yiba ngumlingisi
2.2 Dala igama elingukhiye
2.3 Buyela emuva
2.4 Qinisekisa isimo sengqondo esihle
3 Yini okufanele uyenze lapho inja ingaziphathi kahle?
3.1 Ungayijezisa kanjani inja lapho ichama?
3.1.1 Ungayifundisa kanjani inja yami ukusebenzisa udoti wephedi noma iphedi?
3.2 Ungayijezisa kanjani inja lapho ibaleka?
3.3 Ungayijezisa kanjani inja uma ilwa?
3.4 Umdlwane wami uziveza, ngenzenjani?
3.5 Inja yami iziphatha kabi uma ngingekho, kungani?
Uzoyijezisa nini inja yakho?
Umgexo Wodondog ...
Isijeziso kufanele kwenziwe ngokushesha ngemuva kokuthi inja yenze okuthile okungafanelekile, akukaze kube ngemuva kwesikhashana, ngoba bengingaqondi ukuthi yini isizathu sentukuthelo yakho. Noma yini okubi nakakhulu: uboya bakho bungahlobanisa ukujeziswa nokuthile akwenzile ngaphambilini futhi akukubi kangako.
Ukujezisa inja yakho ngesikhathi esingalungile kuzobangela, ngokuhamba kwesikhathi, Ngiyakwesaba futhi angikuthembi. Masenze isibonelo: ake ucabange ukuthi uyachama embhedeni wakho uma ungekho kanti awumboni amahora amaningi. Uma kunjalo, kungcono ukucabanga ukuthi sekwephuzile nokuthi ukusebenzisa isijeziso njengethuluzi akusasebenzi. Washa amashidi, shintsha umatilasi bese ngokuzayo uqaphele ukuthi ungashiyi iminyango ivulekile uma ungekho ngaphakathi. Ifomula icacile: isijeziso kufanele senzeke ngokushesha futhi senzeke kancane kakhulu.
Ungasisebenzisa kanjani isijeziso?
Iningi labanikazi abazi ukuthi bangajezisa kanjani izinja zabo ngokufanele. Nazi ezinye imihlahlandlela ochwepheshe bokuziphatha kwezilwane abancoma ukuyilandela ukuze izijeziso zisebenze, zicace futhi zinembe.
Okokuqala, kufanele ukhumbule ukuthi uma izijeziso zingaguquguquki, inja yakho izobajwayela futhi bazoyeka ukusebenza. Imfundo kufanele ihlelwe kusengaphambili, ingalokothi ifike ngokungacabangi futhi ingenangqondo. Zama ukuzithiba uma ephinda into efanayo ephindelela, futhi ecabanga ukuthi ukwenza okubi nakho kuyingxenye yemvelo yakhe, noma ngabe awukaze ukwenze lokho? Ungumndeni, futhi uboya bakho, kwezinye izikhathi, buzokwenza okuthile okungaqondakali, kepha qhathanisa lokho nakho konke okuhle okukunikeza kona.
Ungacabangi ukuthi ngokujezisa inja yakho ngokweqile uzozuza inhlonipho yakhe, uzokwesaba kuphela. Ungalokothi ushaye inja, ungaze uyifafaze ngamanzi, futhi ungalokothi usebenzise noma yini engayethusa, njengezindondolo noma imigoqo eyenziwe ngephephandaba. Akunasidingo sokusho Amakhola ama-spike noma amakhola kagesi angamathuluzi okuhlukumeza, hhayi awemfundo.
Isijeziso esihle kakhulu ukudlala umlingiswa ongavumelani nalokhu okusanda kwenzeka, noma ngabe kuzwakala kungajwayelekile. Ukuze inja yakho isabele ephutheni lakhe, indlela ephumelela kunazo zonke ukwenza ihaba ukuphendula kwakho kancane nje ngemuva kokwenza iphutha, futhi okubaluleke kakhulu, kumphuca okwesikhashana into ayithandayo nayisebenzisa ngaleso sikhathi.
Ake sithathe isibonelo: Ake sithi inja yakho ibidlala nawe ibhola bese ithi ukuyikhipha esandleni, iyakuluma. Yini okufanele uyenze? Ilula kakhulu: Yenza umsindo omkhulu, uthathe ithoyizi uhambe ungaphinde udlale ngalo amahora ambalwa. Ngaphezu kwalokho, ungambheki, ungamoyizeli, ungenzi lutho, vele uhoxe umshiye yedwa, ngaphandle kwethoyizi lakhe, ukuze aqonde ukuthi lesi simo sengqondo esibi simenze walahlekelwa yinto ayithandayo.
Ukujeziswa kufanele kungabi nanoma yiluphi uhlobo lwesihluku. Yize kwesinye isikhathi, ubhekene nokukhungatheka okubangela ukuthi ubone ukuthi leyo vase noma usofa owawuthanda kakhulu ugcine usuphazamisekile, ungawunika isiswebhu embongolweni, khumbula ukuthi akuyona inketho enhle kakhulu, ngoba uzogcina usuzisola, ngoba inja yakho izokwesaba kakhulu, futhi ngoba udlame, noma ngabe lincane kangakanani, ludala udlame kuphela. Khumbula ukuthi izinja zephula izinto, wonke umuntu wenza futhi azokwenza, isibopho sakho ukucabanga ukuthi lokhu kuzokwenzeka nakanjani, nokuthi uma kwenzeka, kungcono ukusebenzisa izwi lakho, hhayi izandla zakho.
Dala igama elingukhiye
I-Diyife Clicker ye ...
Ukusebenzisa izwi lakho kuhle, kodwa ungalokothi usho umusho omude, njengokuthi: Ngabe ubonile ukuthi le nto osanda kuyenza iyimbi? ' Ngokusobala, inja yakho ngeke iqonde. Yenza igama bese ulisebenzisa kuphela ngezikhathi lapho kufanele usebenzise isijeziso. Zama ukuzigcina zifushane futhi kulula ukuzisho ngokuzwakalayo, njengo-'Ah ',' Eh ',' Cha ',' Yini ',' Ei ', njll.
Ungayiphindi kaningi. Yisho ngokuzwakalayo kanye, ngemuva kokuthi enze okuthile okungalungile, bese umkhomba umunwe wakho ukuze azi ukuthi usho kanjalo kuye. Ngokusobala, ungathatheki yizintelezi nezinzuzo zalo: izinja zithambile, zimnandi, futhi lapho zithola ukuthi zenze okuthile okungalungile zibeka ubuso obusenza sizizwe sithambile. Kubalulekile ukuthi ngemuva kokusho igama olikhethile ungahleki noma ugone. Ukwenza into enjengaleyo kuzophikisana futhi kumdide, angithi? Melana futhi umdle ngokumanga emahoreni ambalwa kamuva.
Lapho inja yakho isinda, ikuluma isandla, noma idonsa ingubo yakho, yifulathele. Ngalokhu udlulisa, yize kungahle kungabonakali njengokufana, imininingwane eminingi: ngeke akunake uma eqhubeka enza okufanayo. Iya kwenye indawo, futhi ungabuyeli kuye imizuzu embalwa.
Yishiye imizuzu embalwa esikhaleni lapho ingenakho ukufinyelela okubonakalayo kuwe noma lokho ekufunayo. Ungalokothi uyivale ezindaweni ezincane lapho ungazizwa uvaleleke khona noma ufinyinyiwe, lokhu kungakhuphula ukukhathazeka kwakho futhi kwenze isijeziso sikhishwe singakhiqizi ngokweqile. Khumbula ukuthi ngokwenza ngokushesha nangokufanele lapho ubhekene nokuziphatha okubi, uyamsiza nawe.
Izinja ziyaqonda. Imvamisa, ngamazwi aqondile nacacile nezenzo zomzimba, nezijeziso ezingezinhle: ukuhoxisa okwesikhashana izinto azithandayo, zanele. Ukuziba isimilo nakho kuyindlela ephumelelayo, ngokwesibonelo, uma ufika ekhaya ukugxumela kakhulu kuwe bese uyaxokozela, umedlula ngokweqile ukuze abone ukuthi akuyona indlela yokukuthola. Ukuphela kwento okungafanele sikushaye indiva ukuziphatha okunolaka, okungapheli noma okungathandeki, okungadala ukuphazamiseka kuwe noma kwabanye abantu.
Qinisekisa isimo sengqondo esihle
Arquivet Ungadla Okuthambile ...
Musa nje ukusabela lapho enza okuthile okungalungile. Ukuqinisa izimo zengqondo noma isimilo esihle kusebenza kangcono kakhulu kunokusebenzisa noma iziphi izijeziso engizichazile ngenhla.. Banikeze imivuzo emincane (ungabathola lapha) lapho enza into enhle kakhulu: njengokuchama noma ukuchwaza emgwaqeni izikhathi ezimbalwa zokuqala, noma uma ekulalele entweni omcele ukuthi ayenze. Ngabe kukhona okuhle ngaphezu kokubona inja yakho ijabule futhi yanelisekile ukwazi ukuthi akwenzile kulungile?
Ungakhohlwa futhi mthumele ukuthi abhale ububi bakhe izikhathi eziyi-100 ephepheni, ikakhulukazi uma umsebenzi wakho wesikole udlile:
Akunasidingo sokusho, lokho Uma inja yakho inolaka kakhulu nawe noma nabanye, kungcono ukuxhumana nesazi ukuze isebenze naye ngokufanele futhi kancane kancane. Lawa macala ayinkimbinkimbi kakhulu, futhi yize engadingi ukuxazululwa ngodlame futhi, ngokuvamile adinga isikhathi nolwazi iningi labanikazi elingenalo.
Yini okufanele uyenze lapho inja ingaziphathi kahle?
Into yokuqala nebaluleke kakhulu ukuthi phefumula kalula ubekezele. Inja ayisiye umuntu, ngakho-ke amagama awasizi ngalutho uma eshiwo masinyane, futhi angasho lutho ngezwi lokuthukuthela. Kumele ucabange ukuthi kungani engaziphathi kahle, bese wenza okuthile. Isibonelo, ake sazi ukuthi senzeni kwezinye izimo:
Ungayijezisa kanjani inja lapho ichama?
Akekho othanda ukuza ekhaya athole umchamo kanye / noma indle endlini, kepha kungani inja yakho ikwenza lokho? Kungenzeka ukuthi akaphumi ngokwanele ukuhamba, noma ukuthi usengumdlwane ngakho-ke usenazo "izingozi" lezo.
Yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe? Well ake sibone. Uma uke wayibamba inja yakho izikhululela endlini, yisho ngokuqinile nangokucacile ukuthi "CHA", kodwa ngaphandle kokuythethisa. Ukusuka lapho, qala ukumkhipha kaningi, noma umfundise ukwenza izinto zakhe ngethreyi.
Ungayifundisa kanjani inja yami ukusebenzisa udoti wephedi noma iphedi?
Okufanele ukuthi uqale lapho kuwumdlwane, yize usumdala nayo izoyifunda, kuthatha nje isikhashana. Ngokuyisisekelo okufanele ukwenze mthathe lapho unethileyi khona noma umoseki ngokushesha nje lapho ubona ukuthi usezozikhulula, bese uyibeka ngaphakathi.
Ukukusiza uqonde ukuthi ufunani, kuyasiza ukuthatha isampula yomchamo noma indle uyibeke ngaphakathi kwethreyi noma iseyila. Uma ungenazo izikhwama zangaphansi, ungabathola lapha
Ungayijezisa kanjani inja lapho ibaleka?
Inja ephunyukayo imvamisa iyisilwane esingajwayele ukwenza konke ukuzivocavoca okufanele, esingazizwa sikhululekile endlini lapho sihlala khona, noma esiphumile sayofuna inyamazane ethile (mhlawumbe inyoni). Kubaluleke kakhulu, ukuzama ukumkhiphela ngaphandle izikhathi eziningana ngosukukanye nokudlala naye ukumenza ajabule futhi ajabule. Ngaphezu kwalokho, ukumemeza nokungezwani ekhaya kufanele kugwenywe.
I-GPS DOG 4 esebenzayo....
Yini okufanele uyenze lapho? Okokuqala zibuze ukuthi ngabe isilwane sithola ukunakekelwa okudingekayo yini. Akwanele ukubanika amanzi, ukudla nophahla ukuze bazivikele emakhazeni. Inja idinga ukuhlala futhi ibe nomndeni, oyithandayo futhi oyihloniphayo, futhi oyikhathalela ngobuqotho inhlalakahle yayo. Uma lokhu kuyiqiniso, akudingeki ukuthi wenze noma yini ngaphandle kokubeka inethiwekhi ukuze ingakwazi ukuphuma.
Kepha uma ukumemeza nokungezwani kuhlala njalo ekhaya, kungcono ukucela usizo.
Ungayijezisa kanjani inja uma ilwa?
Izinja ziyizilwane ezinokuthula ngokwemvelo, kepha kwesinye isikhathi ukungazethembi kanye / noma ukwesaba kubangela ukuthi basabele ngolaka. Uma lokhu kwenzeke kumngane wakho, yehlisa umoya. Kunzima, kodwa ngethembe, kwenzelwa okungcono kakhulu. Kufanele ubekezele kakhulu, futhi ikakhulukazi kulezo zimo, ngoba uma uboya bukubona ukwethuka kwakho, iyozizwa ishuba ngokwengeziwe futhi isimo sizoba nzima kakhulu..
Ngakho-ke, beka inja yakho kwi-leash bese uyisusa lapho ngokushesha okukhulu. Uma ungeke ukwazi ukumnqanda, ake othile amthathe ngekhola (okungcono afake ibhande) bese umfaka intambo. Bese uhamba, futhi uma usendaweni eyimfihlo, phonsa izingcezu zokuphatha izinja phansi. Lokhu kuzokusiza uphumule.
Ungakhathazeki: uma sekudlule imizuzu emibili phakathi kokuphela kwempi nesikhathi lapho umnikeza okuphatha, ngeke azihlanganise. Noma kunjalo, Kungakuhle uthintane nomqeqeshi wezinja osebenza kahle ukuthola ukuthi kungani inja yakho iziphatha kanjena futhi ikutshele okufanele ukwenze ukuze ibe yisilwane esizolile futhi esijabule ngokwengeziwe.
Umdlwane wami uziveza, ngenzenjani?
Imidlwane iyizihlubuki nakuyo uqobo. Kujwayelekile ukuthi zikulume futhi zize zishaye wena. Kepha kungumsebenzi wakho ukubafundisa ukuthi lokhu akulungile, futhi futhi, ngokubekezela. Ngaphandle kokubekezela akukho okuzotholakala. Ukuze ubafundise ukuthi ukuluma umuntu akulungile ngokwesibonelo, kufanele wenze okulandelayo:
Uma isandla sakho silunywe, ungasinyakazisi. Uzobadedela kungekudala.
Uma usumbuyisile, bayeke bodwa ungabanaki aze akhululeke.
Uma umlalela futhi, thatha ithoyizi bese udlala naye (nemidlwane yakho).
Ungenzi ukunyakaza okungazelelwe. Uma uzenza, uzosho ukuthi lokhu kulungile, futhi bazokwenza nawe, ngengozi elandelayo yokulimala.
Inja yami iziphatha kabi uma ngingekho, kungani?
Kunezizathu eziningana ezingaba khona: unesithukuthezi futhi / noma udabukile, noma unayo ukukhathazeka ngokwehlukana. Kunoma ikuphi, okufanele ukwenze nje zama ukushisa amandla ngaphambi kokushiyaKuphakathi kokuthi ekhaya sidlala naye isikhathi eside, noma simkhipha ukuhamba noma ukugijima. Futhi, uma sekusele cishe imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuba uhambe, ungasho lutho kuye. Ngale ndlela, uzomsiza akwazi ukuzola.
Uma kuyinja enenkinga yokwehlukana kokukhathazeka futhi lokhu kubucayi; Okusho ukuthi, uma ufika ekhaya uthole ifenisha ephukile noma izinto ezilunyiwe, unganqikazi ukubonisana nochwepheshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayijezisa kanjani inja
NgineBichon Frize. Futhi ayingilaleli. Wenza izidingo zakhe yonke indawo. Isivele inendawo yayo ngokudla kwayo namaphephandaba. Kepha ukhetha indawo ephansi. Ngiyaqhubeka nokuhlanza. Futhi ayingilaleli. Ngenzeni?. Ngikhathele kakhulu. Udlalela uNo Y wami ebusuku kuphela. Kwenza izimpophoma. Akungivumeli ngilale.
Omar higueras kusho
Ineminyaka emingaki inja yakho? Ngokuya ngeminyaka yakhe, ukumfundisa ukuzikhulula ngaphandle kuzoba lula noma kuncane. Kunoma ikuphi, akulula futhi kudinga umzamo omkhulu, ukubekezela nokuzibophezela.
Ngiphakamisa ukuthi njalo uma umkhipha uchame noma uchame, umhalalisele futhi umphathise ukuze abone ukuthi kulapho okumele akwenzele khona. Kulokhu, kuzofanele uzibophezele ekususeni njalo, kabili noma kathathu ngosuku. Ungalindeli ukuthi angayifunda ngosuku, kwesinye isikhathi kuthatha izinyanga. Kepha ngokubekezela nokuziphendulela, uzophumelela.
Enye indlela ukuthi usebenzisa iphephandaba ukukwenza lapho. Inqubo ilula: njalo uma ubona ukuthi ufuna ukuchama noma isisu, mhambise ephephandabeni futhi uma ekwenza lapho uyamhalalisela. Kuzofanele unake kakhulu futhi ugcine isikhathi lapho uzizwa uthanda ukwenza ngokushesha.
Ngiphakamisa ukuthi ushiye uchame omncane endaweni, ukuze ayinuke futhi azi ukuthi nakule ndawo kufanele akwenzele khona. Inja yakho mhlawumbe ikwenza yonke indlu ngoba inuka ipipi elidala, noma ngabe uyihlanze kangakanani. Uma umbona echamela lapho engathinti khona, yithi 'CHA' bese umkhomba umunwe wakho, esikhundleni salokho, lapho enza lapho ethinta khona, yithi 'KAKUHLE KAKHULU' bese umphulula ngobumnene. Ngiyakuqinisekisa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzowuqonda umehluko.
Ekugcineni, uma inja yakho ibubula, ayikuvumeli ulale futhi lokhu kuphazamisa ikhwalithi yokuphumula kwakho, ngiphakamisa ukuthi umane ungalali nayo.
Ukubingelela, ukubekezela, nanoma yimiphi imibuzo onayo, ungangabazi ukusitshela!
Phendula u-Omar Higueras
Sawubona, nginomdlwane osanda kuba nonyaka ubudala, i-American Standford, ngaphambi kokuba sihlale sinaye endlini, kodwa waqala wabhubhisa yonke into, umatilasi, umbhede wakhe, amashidi ... simthengele ithoyizi elinzima ngalo ukudla ngaphakathi (Kong) Ukuzama ukumgcina ejabule ngenkathi thina singasekho kodwa ubesekhathele ithoyizi noma adle ukudla ngaphakathi aqhubeke aphule izinto. Sikhethe ukumshiya egcekeni, nendlu yakhe namathoyizi, kepha noma kunjalo usephule indlu yakhe, uvule nomnyango omncane lapho kunezinto ezisendlini. Njalo uma engena, ngiyamyisa emnyango ofanayo, ngiyamkhombisa lokho akulumile, ngiyamthethisa ukuthi akulona iphutha, uzijikijela ngomhlane, uhlala ethule nobuso bokudabuka, futhi "ngiyamjezisa "ngokumbopha bese kuthi isikhashana ngidedele yena kodwa kuya ezinsukwini noma ngisho ngayo leyo ntambama ntambama kuphinde kuvele okuthile. Ngingakwenza kanjani ukukufundisa? Yinja enhle, ethanda ukuhlangana nabantu yize inokhahlo omncane, iyalalela ukunikeza imilenze yayo, ihlale phansi, ilale phansi, kepha ayikho indlela engayeka ngayo ukwephula izinto. Ngidinga usizo ngicela!
Sawubona Cristina, inja yami ibisesimweni esifanayo, yeza ukuzophula usofa wami, yabe isidla udoti wayo.
Udokotela wezilwane ophumelele kakhulu wangitshela ukuthi ngidinga ukuzivocavoca umzimba.
Futhi uma ebengenaso isikhathi sokuhamba naye nsuku zonke, ubengakwenza ekhaya, esitimeleni, noma aze aphonse ibhola, ngezikhathi ezithile, kanti iqiniso ukuthi, uma ebenenja ecindezelekile, futhi uma wenza ukugijima noma ukuhamba ngezinyawo kusho ukuthi akwenele kuwe, futhi udinga ukuzivocavoca okwengeziwe.
Sawubona cecilia. Inja yami nayo yakwenza lokho. Futhi siyayilala. Ngiyethemba lesi seluleko siyakusiza. Ukuqabula, uLaura
Phendula u-El Luis
Inja yami inezinyanga eziyi-7 futhi njalo uma sishiya ikhaya sibuya sithola izicathulo noma izingubo eziphukile, kuyamcindezela ukwenza lokho ngoba lapho azi ukuthi ngizoya lapho abangela khona lokho, yena amaqabunga, angazi ukuthi ngenzeni kwesinye isikhathi ubaba wami uyamjezisa kepha kuze kube manje uyaqhubeka nokwenza ...
Sawubona, mina nentombi yami sine-bulldog yaseFrance futhi okwenzekayo ukuthi kwesinye isikhathi uba nolaka lapho enye yendlu ihamba, noma kwesinye isikhathi lapho mina nentombi yami sidlala iba nolaka nami futhi asazi ukuthi yini engahambi kahle noma ngenzeni ngaleso simo sengqondo, ngingajabula uma ungangisiza ngale ndaba, imikhonzo nokubonga
Ngiyabonga kakhulu, ngifunde okuthile okubaluleke kakhulu. Iyiphi indlela yokufundisa nokunakekela inja yakho. Kuwusizo kakhulu ngaphambi kokuba ngenze izinto ezingalungile engizisolayo ngazo, kepha lokhu kuzongisiza ngenzele izinja okuhle kakhulu.
Sawubona! Nginezinja ezimbili esezikhulile, uJacob noChesnut. I-Chesnut ayivumeli uJakobe ukuba adle, aphuze amanzi noma akhululeke. Unomona kakhulu ngaye futhi uhlala ebangela ukulwa. UJakobe wayemesaba kakhulu futhi ukhetha ukubekezela futhi angenzi lutho ukuze angabangeli izinkinga. Angazi ukuthi ngenze njani ??? Ngihlale ngijezisa uChesnut ngokumshiya yedwa noma ngingamnaki kodwa bese ekhipha uJacob.
Izici nokunakekelwa koMalusi Omnyama waseJalimane